Mayelana NATHI | I-Hebei Lihua Pharmaceutical Co., Ltd.
I-Hebei Lihua Pharmaceutical Co, Ltd ibhizinisi elisezingeni eliphezulu eligxile kwezentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe zemithi yezilwane, enenhlokodolobha ebhalisiwe engu-80 million yuan. Ngomsebenzi we "Iminyaka Eyikhulu Eyodwa Yokuphila, Ukufuya Okunamandla Kwezilwane Nokuchuma Kwezolimo", inkampani izibophezele ekubeni ngumhlinzeki womkhiqizo wokwelashwa kwezilwane osezingeni eliphakeme ngokususelwa kubuchwepheshe namathalente.
Le nkampani yasungulwa eShijiazhuang Nanwu Women Development Zone ngo-2003. Ngo-2004, yabalwa njenge- “Star Enterprise of Veterinary Medicine Production Scale” eShijiazhuang City. Ngo-2005, yabalwa njenge- “Hebei Provincial Science and Technology Enterprise” ne “National Star Promoting Project Key Promotion Product Enterprise” “Ngo-2006, yabalwa njenge-“ brand yezidakamizwa yezilwane enamandla kunayo yonke embonini yezokwelapha yaseChina ”yiChina I-Animal Health Association, kwathi ngo-2007 yalinganiswa njenge- “Top 20 Veterinary Medicine Enterprises esifundazweni sase-Hebei” yi-Hebei Animal Health Products Association. Ngo-2008, safuna ama-35.5 mu komhlaba eXinle Airport Industrial Park, eShijiazhuang City, futhi sakha isizinda esisha sokukhiqiza, ngaleyo ndlela singena esigabeni esisha. Ngo-2010, ama-workshops angu-4 kanye nemigqa yokukhiqiza engu-7 yenkampani entsha yenkampani yadlulisa ukuhlolwa kwe-GMP kazwelonke ngasikhathi sinye, futhi yaqala ukusebenza ngokusemthethweni yafaka ekukhiqizeni. Ngawo lowo nyaka, yalinganiswa njenge- “Top Ten Key Investment Promotion Units” yiXinle City. Ngo-2011, inkampani yanikezwa ngokusemthethweni “iTeaching Practice Base” yiHuazhong Agricultural University. Ukubambisana kwebhizinisi lesikole kwabuye kwathuthukiswa. Ngo-2012, ukuze kuthuthukiswe imakethe yamazwe omhlaba, sayidlulisa kanye. I-ISO9001, isitifiketi sekhwalithi yamazwe omhlaba jikelele ye-ISO22000. Ngo-2013, le nkampani yandise uchungechunge lwezimboni futhi yazibandakanya emkhakheni wezolimo. Uhlelo oluphelele lwephrojekthi yepulazi lezingulube elilinganiselwe ngokwemvelo eyi-120,000 livunyelwe ukwakhiwa. Isigaba sokuqala sephrojekthi sihlanganisa indawo engaphezu kwamahektare angama-300. Njengamanje, isebenza kahle futhi iphrojekthi enkulu yezolimo e-Xinle. Ngo-2015, kwaqala amalungiselelo okwakhiwa kwendawo yokusebenzela entsha, engeza imigqa eminingana yokukhiqiza yamathebulethi, ama-granules, imijovo engahlanjululwa, njll, ukulungiselela ukuthuthukiswa kwemakethe yamazwe omhlaba. Selokhu kwasungulwa inkampani, ngokwakhiwa kwezolimo zasemanzini, okuphakelayo nokuhlanganiswa kanye nokutholwa, iye yazuza kancane kancane ukwehlukahluka emkhakheni wezolimo wanamuhla. Ngo-2016, inkampani yanikezwa isihloko esithi "Key Shijiazhuang Agricultural Industrialization Leading Enterprise". NgoJanuwari 2017, ulayini omusha wokukhiqiza wamaphilisi, ama-granules kanye nemijovo engavimbeli inzalo kudlulise ukwamukelwa kwe-GMP ne-ISO, kwaqala ukusebenza nokukhiqizwa. Kukalwe njengonyaka ofanayo. "Ama-SME we-Hebei Science and Technology". Ngo-2018, yanikezwa i- "Hebei Industrial Enterprise R & D Institution" ne- "High-tech Enterprise". Ekuqaleni kuka-2019, kukalwe ngokuthi "Ibhizinisi Eliphambili Elihamba Phambili Lesifundazwe saseHebei" kanye ne- "Hebei Science and Technology Small Giant Enterprise". Inkampani ikholelwa ngokuqinile ukuthi ubuchwepheshe obuyisisekelo umkhiqizo wokuqala!
Le nkampani njengamanje inabasebenzi abangama-216, nemfundo yasekolishi futhi ngenhla i-akhawunti yayo ingu-80% wemali yenkampani.
Njengamanje, ukuthengiswa kwemikhiqizo yasekhaya kukhanya ngaphezu kwezifundazwe ezingama-20, futhi kusiza amaqembu amakhulu namapulazi amancane naphakathi nendawo.
imikhiqizo yayo ithunyelwa emazweni ayi-15 (i-Ethelbia, iSudan, iPakistan, iMyanmar, iCameroon, iChad, njll.).
Le nkampani njengamanje inabasebenzi abangama-216, nemfundo yasekolishi futhi ngenhla i-akhawunti yayo ingu-80% wemali yenkampani. Ngokuya ngocwaningo nentuthuko, inkampani njengamanje isebenzisana namanyuvesi nothisha abanjengoHuazhong Agricultural University kanye neWuhan University of Light Industry. Kunemishanguzo emisha ezingeni likazwelonke e-4 emenyezelwe, kanti imikhiqizo ye-patent engu-6 nezindlela ezi-3 zokulungiselela amalungelo obunikazi zitholakele. Ngasikhathi sinye, kuzokwakhiwa isikhungo esisekela i-R & D kanye nesikhungo sokulawula ikhwalithi kanye nesikhungo sokuhlola ikhwalithi ukunikeza umfutho wentuthuko eqhubekayo yenkampani futhi esheshayo.
Njengamanje, ukuthengiswa komkhiqizo wasekhaya kukhanya ngaphezu kwezifundazwe ezingama-20, futhi kusebenza amaqembu amakhulu (COFCO, Yangxiang, Luo Niushan, Tangrenshen, Yurun, Xiangda, njll.) Kanye namapulazi amancane naphakathi nendawo. Ngo-2017 nango-2018, badlula e-Ethiopia, Ukwamukelwa kweSudan International GMP kuvula imakethe yakwamanye amazwe yeLihua, futhi imikhiqizo yayo ithunyelwa emazweni ayi-15 (i-Ethelbia, iSudan, iPakistan, iMyanmar, iCameroon, iChad, njll.).
Le nkampani isuselwa kumqondo ofanayo, nomoya wokuqhubekela phambili nokuphishekela ubuhle, ikhwalithi yokuphatha abantu ngobuqotho nangomsebenzi okhuthele, nabantu abanomqondo nabantu abanomqondo engqondweni; kusuka ekuthuthukisweni kwesikhathi eside kokuqashwa, nethalente elinombono. Ngokungeniswa, ukutshalwa kanye nokuthuthukiswa kwamathalente amahle kakhulu, nangemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo ukwenza iminikelo emihle ekuthuthukiseni imboni yezolimo yaseChina, u-Hebei Lihua Pharmaceutical uzokufeza ukuzibophezela kwakhe ngekhulu lama-21 lemithi yezilwane nemfuyo yezilwane , futhi ubelokhu enza imizamo engapheli Ukusebenza kanzima!
I-workshop yokukhiqiza isebenzisa ngokuqinile izidingo zokuphathwa kwe-GMP futhi idinga ukuthi sonke isisebenzi kuyo yonke imininingwane sibenze babone ukuthi ikhwalithi yokukhiqiza akuyona into encane. Ukuphathwa okuqinile kuphela nokuphathwa okujwayelekile kungakhiqiza imikhiqizo emihle, okuyilokho esivame ukukusho, kukhona izixhumanisi engqondweni, Yebo, yenza umuthi.
Inkampani yethu isuselwe kwisayensi nobuchwepheshe namathalente, futhi izibophezele ekwakheni umkhiqizo omusha onezici zeLihua. Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezahlukahlukene zemikhiqizo yezilwane ezimakethe ezweni lonke, uLihua Pharmaceutical uyagcizelela ukuma endaweni ephakeme embonini, wethula ochwepheshe abaningi njengomgogodla wocwaningo nentuthuko kaLihua, futhi usebenzisana nabachwepheshe abaphezulu kanye namalabhorethri embonini ukukhuthaza ukuthuthukiswa kocwaningo lwezidakamizwa nentuthuko. . Inkampani yethu ithobela umoya wobuhlakani futhi igxile ekwenzeni imikhiqizo. Imikhiqizo eyisithupha ekhona iwine amalungelo obunikazi kazwelonke wezinto ezisetshenziswayo nemikhiqizo emithathu eye yazuza iwine amalungelo obunikazi wokusungula kazwelonke , ehola ukuthambekela komkhakha. Ngasikhathi sinye, kumenyezelwa umuthi omusha osezingeni likazwelonke nokwakha uphawu lweLihua. Sikholelwa ngokuqinile ukuthi ukusebenza kancane nokusebenza kanzima, ubuhlakani kanye nekhwalithi!